Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao – FJKM Ambavahadimitafo Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao |
Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao
Publié le 26 juillet 2020 à 01:07
Noho ny fitandremana ny ara-pahasalamana iaraha-mahalala dia samy manatanteraka ny fanompoam-pivavahana ny isan-tokatrano manaraka ny fandaharana hiombonana sy ny toriteny eto ambany.
Fa hoy tokoa ny Tompo : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo @ Anarako, dia ao afovoany Aho » Matio 18:20
Lohahevitra Jolay 2020 : « Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo ».
– Salamo 66 and 16 – 20
– Hira FF 9
– Vavaka .
– Hira 175 and 1,3
– 2Samoela 7: 17 – 24
– Lioka 8: 26 – 39
– 2Timoty 2:1- 13
– Hira 313 and 1.
Laharana faha 4.
– Hira FF 26
Fanolorana Rakitra : vavaka
Ny hafatr’Andriamanitra dia nalaina tao amin’ny Lioka 8 : 26-39
26DIA nitody tany amin’ny tanin’ny Gerasena izay tandrifin’i Galilia izy. 27Ary raha niala nankeny an-tanety Jesosy, dia nifanena taminy ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna, izay efa nanana demonia, ary efa ela izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano, fa teny amin’ny fasana. 28Fa nony nahita an’i Jesosy izy, dia niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin’ny feo mahery hoe: Moa mifaninona akory izaho sy Hianao, ry Jesosy, Zanak’Andriamanitra Avo Indrindra ô? masìna Hianao, aza mampijaly ahy. 29Fa Izy nandidy ny fanahy maloto hivoaka tamin-dralehilahy. Fa efa nahazo azy ela izany; ary efa nafatotra tamin’ny gadra, na ny tànany, na ny tongony, ka nambenana izy; nefa notapahiny ny fatorana, ka dia nentin’ny demonia niriotra nankany an-efitra izy.30Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe: Iza moa no anaranao? Dia hoy izy: Legiona; fa demonia maro no efa niditra tao anatiny. 31Ary nifona taminy izy mba tsy handidiany azy hankany amin’ny lavaka tsy hita noanoa. 32Ary nisy kisoa maro andiany iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demonia nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. Dia nekeny. 33Ary ny demonia, rehefa nivoaka tamin-dralehilahy, dia niditra tao anatin’ny kisoa; ary ireo kisoa andiany ireo nitratrevatreva tamin’ny hantsana ho any amin’ny farihy, ka dia maty tany. 34Ary nony hitan’ny mpiandry izany natao izany, dia nandositra izy ka nilaza izany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. 35Dia nivoaka ny olona mba hizaha izany natao izany; ary tonga tany amin’i Jesosy izy, dia nahita an-dralehilahy, izay efa nivoahan’ny demonia, fa indro izy nipetraka teo anilan’ny tongotr’i Jesosy nitafy lamba sady ary saina; dia raiki-tahotra ireo. 36Ary izay efa nahita dia nanambara tamin’ny olona ny namonjena an’ilay demoniaka. 37Ary ny olona rehetra tany amin’ny tanin’ny Gerasena manodidina dia nangataka an’i Jesosy hiala aminy, satria raiki-tahotra indrindra izy; ary Jesosy niondrana an-tsambokely ka niverina.38Ary ny lehilahy izay efa nivoahan’ny demonia dia nangataka mba hitoetra ao aminy; nefa nampodin’i Jesosy izy ka nataony hoe: 39Modia ihany any an-tranonao, ka ambarao ny zavatra lehibe nataon’Andriamanitra taminao. Dia nandeha izy ka nitory eran’ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’i Jesosy taminy.
– Hira 171 and 3
« Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra » Amen
Mirary ny fiadanan’ny Tompo ho aminareo